Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka oo maanta ka furmaya Muqdisho – Kalfadhi
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in uu maanta furo Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka oo fasax ku jiray bilooyinkii la soo dhaafay, waxaana goob joog ah Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxamaan iyo ku xigeenadiisa.
Munaasabadda furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka oo ka dhacaysa Xarunta Iskuul Buluusiya ayaa waxaa ka qayb galaya mas’uuliyiin katirsan Guddoomiyaasha baarlamaanada ee Maamul Gobaleedyada iyo madax kale oo katirsan DF-ka Soomaaliya.
Ammaanka ayaa aad loo adkeeyay waxaana la xiray inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho, sidoo kale waxaa la baarayaa gaadiidka isticmaalaya wadooyinka furan si ka duwan sidii hore.
Munaasbadda furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka ayaa gaar u ah Aqalka Hoose oo kaliya waxaana ka maqan Aqalka Sare. Wali waxaa taagan Khilaafka u dhaxeeya labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliay.